DOOLOW, Somalia - Wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur (Janan), ayaa galabta si dirqi ah uga badbaadey Qarax lagula eegtay duleedka degmada Doolow, ee gobolka Gedo.
Wararka aan ka helayno Illo-wareedyo ku sugan Doolow ayaa sheegay in Kolonyo Gaadiid ah, oo la socday Cabdirashiid Janan in lagu weeraray Qarax Miino, xilli uu kusoo jeeday degmadaasi, kana yimid dhanka magaalada Luuq.
Cabdirashiid Janan iyo Wasiirro kala ayaa u jooga gobolka Gedo kiiska dil labo maalmood kahor magaalada Balad Xaawo loogu geestay saddex dhalinyaro ah, oo lagala baxay saldhiga degmadaasi. Al shabaab ayaa sheegatay Mas'uuliyada weerarka Miino.
Mas'uuliyiinta Balad Xaawo, oo ku jiraan Gudoomiyaha degmada, Ku xigeenkiisa, iyo Taliyaha Nabad Sugida, ayaa loo xiray dilkaasi, waxaana lagu hayaa hadda degmada Doolow, oo la filayo in dhawaan Maxkamad lagu soo taago.
Wararka ayaa sheegay in la xiray 7 Askari oo katirsan Ciidamada ...
Soomaliya 19.02.2018. 19:40